Filimka caawo ASTAAN TV saaran Dashing Rambabu (2017) filim Sunil iyo Prakash Raj (See Rabtaa) isku heleen wax badan ka ogaaw – Filimside.net
Filimka caawo ASTAAN TV saaran Dashing Rambabu (2017) filim Sunil iyo Prakash Raj (See Rabtaa) isku heleen wax badan ka ogaaw
February 19, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 19, 2019
Caawo ASTAAN TV (Mogadishu) Kanaalka 5-aad waxaa kasoo galaayo filimka Telugu ah Dashing Rambabu (2017) ama Ungarala Rambabu (2017) loo yaqaan ee Action-ka iyo mada daalada dhameestiran leh waana mashruuc sheekadiisa aad loo amaanay,dhankeena filim cusub ayuu ka yahay madaama fasiraadiisa nagu cusub tahay.
Jilaayaasha filimkan: Sunil Verma, Maya iyo Prakash Raj (See rabtaa)
Xiliga la daawaday: 15 Seo 2017
Fariinta Filimka Pencil Oo Kooban: Ram Babu (Sunil) waa nin taajir ah balse wax walbo oo hanti leeyahay ka lumeyso marka uu awoowihiisa geeriyoodo. Kadib wuu iska soo baxaa wuxuuna u imaanaa Badam Baba (Posani) wuxuuna siinaa talooyin kala duwan oo ay ka mid tahay inuu dhul banaan ku beero geedo.
Nasiibkiisa Ram Babu (Sunil) dhulka wuxuu ka helaa buskut dahab ah oo qiimo ahaan ku fadhiyo 200 Crore ($28m) mar labaad ayuuna taajir noqonaa. Mudo kadib ganacsigiisa ayuu ku qasaaraa mar labaad Badam Baba (Posani) ayaa usoo jeedinayo talo ah inuu guursado Miya George gabbar xafiiskiisa si noloshiisa u bad baado.
Laakiin wax walbo waxay isbadalayaan marka Ram Babu (Sunil) marka ay isku dhacaan gabadha uu guursan rabo aabaheed Prakash Raj (See Rabtaa) kaasi oo dabci ahaan fikrada hanti goosadka aaminsan isaga iyo wiilka uu sodaga u noqon rabo fikrad ahaan isma aaminsano.
Waxaana qaybaha dambe loo daawan doonaa filimkan Rab Babu (Sunil) sida uu jaceylkiisa ku heli doono iyo sida ay sodagiisa isku fahmi doonaan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Dashing Babu (2017) oo xiiso badan: